Thwebula Hola Launcher 2.0.5 – Vessoft
Thwebula Hola Launcher
Hola Launcher – a Sokuqalisa ethandwa ngokusekelwa izici eziningi ewusizo. Isofthiwe ikuvumela ukuba ukhethe bese ukufaka wallpapers original, amafonti zanamuhla, HD icons, imiphumela ehlukahlukene Ukuphenya njll Hola Launcher isekela imisebenzi ukuhlanza inkumbulo futhi kusheshiswe ukusebenza idivayisi. Ngokuzenzakalelayo Isofthiwe amaqembu izicelo ezifakiwe by imikhakha futhi ihambisa ukuba amafolda ezifanele. Hola Launcher iqukethe esakhelwe search engine futhi uhlelo eyingqayizivele amawijethi for bekhompuyutha yakho. Futhi isofthiwe unalo ikhono ukuncoma umsebenzisi izicelo ezithakazelisayo kusukela Market Play.
Ukubuthelela Automatic kwezicelo izigaba
Ukushintsha esibonakalayo ukuze ivumelane nezidingo zakho
Hlanza isikhala umsebenzi
Amazwana on Hola Launcher:
Hola Launcher Ahlobene software: